CPort Isu abaabulka iyo xareynta - Amjambo Africa
Mareykanka gudihiisa, muwaadiniinta waxaa laga rabaa inay xereeyaan canshuuraha sanadlaha ah isla markaana ay bixiyaan qeybtooda canshuurta dakhliga ugu dambeyn Abriil 15 sanad kasta. Diyaarinta canshuuraha waxay umuuqataa mid xad dhaaf ah, laakiin maahan inay ahaato. Si wax loo fududeeyo, halkan waxaa ku yaal liistada dukumiintiyada iyo macluumaadka la ururinayo ka hor intaadan booqan xirfadle canshuur ama aan xereyn canshuurahaaga.
Janaayo waa marka dadku bilaabaan inay helaan dukumiintiyada loo baahan yahay si loo xareeyo canshuuraha. Kuwaan waxaa badanaa bixiya loo shaqeeyeyaasha waxayna ku jiri karaan W-2s (foom muujinaya dakhliga soo galay sanadkii hore) ama 1099s (nooc kale oo ah qaab dakhli)
Macluumaadka Shakhsi ahaaneed looga baahan yahay buuxinta canshuuraha. Macluumaadkan waxaa sidoo kale looga baahanyahay xubnaha qoyska (oo ay kujiraan lammaanayaasha iyo kuwa ku tiirsan.
Service Adeegga Dakhliga Gudaha(IRS) ayaa mararka qaarkood bixin doonta dhibco iibsashada lagama maarmaanka ah ee la qabtay intii lagu jiray sanadka. Kuwan waxaa loo yaqaan ka-goynta waxayna yareeyaan xaddiga dakhliga la soo sheegayo. Marka dakhliga la yareeyo, dadku waxaa laga yaabaa inay helaan dib u soo celin sare ama inay bixiyaan wax ka yar canshuuraha. Soo ururi risiidhada iyo caddeynta waxyaabaha loo soo iibsaday in loo isticmaalo ka-goyn ahaan.
• Kharashka socodsiinta sahay ganacsi, kiro, iwm.
• Deeqaha sadaqada ah
• Kharashyada caafimaadka
• Kharashaadka daryeelka caruurta
• Kharashaadka waxbarashada
• Kharashaadka caymiska caafimaadka
• Qoraallada keydinta hawlgabka
• Hagaajinta tamarta ku habboon guriga
Canshuuraha waxaa lagu diyaarin karaa gacanta oo loo diri karaa IRS. Waxaa sidoo kale lagu xereyn karaa internetka iyagoo adeegsanaya softiweerka diyaarinta canshuuraha. Milkiilayaasha meheradaha yaryar badanaa waxay isticmaalaan xisaabiyeyaasha canshuurta si ay uga caawiyaan diyaarinta dukumiintiyada canshuurta, maadaama ay aqoon fiican u leeyihiin sharciga canshuuraha oo runtii ka caawin kara dadka inay si sax ah u xareeyaan oo ay caqli u yeeshaan jarista iyo diyaarinta canshuuraha.
Waxaa jira ururo badan oo maxalli ah oo ka caawiya dadka diyaarinta canshuuraha. Tabaruceyaasha bulshada inta badan waxay kaa caawin karaan canshuuraha qiimo jaban ama aan qiimo lahayn. Markay dadku goor hore fayl gareeyaan, shaqadu way dhammaataa oo culeyska ayaa yaraanaya. Lacag celinta ayaa dhaqso loo dhigayaa, canshuurahana waa la dhameeyay sanadka.
taxes Canshuuraha la xareeyo kadib, waa fikrad fiican in dukumintiyada la wada haysto, oo ay ku jiraan risiidhada iyo waraaqaha kale. Ku keydi dhammaan dukumiintiyada meel aamin ah oo ay la socdaan canshuur celinta si loo xafido diiwaangelin aamin ah. Sannadka soo socda xilligan, hawshu way sii fududaan doontaa!
PreviousMaxay tahay in la ogaado marka la xareynayo
NextMaine Credit Union Faa’iidooyinka Cashuur xareynta Hore
Miyaad ka fikireysaa inaad u wado Uber ama Lyft? Hubso inaad ka fekereyso caymiska!
Qalalaasaha Itoobiya \_”Waxaan ahaa caqli xumo in aan rumeysnaa in Itoobiyaanku aysan la dagaallami doonin gudaha
Cusbooneysiinta ka timid ILAP